TCDD Makinist ve makasçıları yıpranma istiyor – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara10 BalikesirTCDD Machinist iyo shredders waxay doonayaan inay xiraan
12 / 12 / 2016 10 Balikesir, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Mashiinnada TCDD iyo maqasku waxay rabaan inay xirtaan: makaanikooyin badan iyo dhibaatooyin nafsaani iyo halgan in ay ka shaqeeyaan xaalado adag, ayagoo dalbanaya xaqa xirashada, taasoo muujineysa inay shaqeynayaan.
Xarunta dhexe ee United Railroad Association ee Balikesir (Bir-DEM) Madaxweyne H. Erdinc Budak, TCDD oo ka shaqeynaya mashiinka 26 bin 500 iyo tababaro saraakiisha ka shaqeeya xaaladaha ugu adag, oo muujinaya in maqasku doonayo in dib loogu celiyo xuquuqda xirashada.
Budak wuxuu sheegay inay wareysiyo la yeesheen Agaasime guud ee TCDD, Wasaaradda Gaadiidka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka. Waxaan tan u sheegnay annaga oo aadna Ankara. Shaqaalahan ayaa u qalma magdhowga adeegga dhabta ah Xaaladaheena shaqada ayaa aad u daran. Cimilada cimilada, jawiga jireed, kuleylka, qabowga, boodhka iyo buuqa ayaa muujinaya sida ay u adag tahay in xaalad loo shaqeeyo, ”ayuu yidhi.
Isagoo soo jeedinaya in farsamayaqaannada iyo maqasleydu ay soo gabagabeeyaan shaqadooda kahor inta aysan gaarin howlgabnimada, Budak wuxuu yiri, “Waxaan aaminsanahay in shaqaalahan laga yaabo inay howlgab noqdaan ugu yaraan mudada ay shaqeynayaan markay helaan magdhowga cudurada shaqada. Markaan eegno sharciga loo yaqaan '5510', waxaan u maleyneynaa in asxaabteena ay mudan yihiin xaqa ay u leeyihiin inay xirtaan in kabadan kooxaha kale ee xirfadda leh sababtoo ah waxay ku shaqeeyaan duruufo adag iyo xaalado xun '.
Kalp Markaad ka shaqeynayso khadka sare ee korantada, waxaa jira xaalado wadne istaag ”
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in mashiinka mashiinka iyo maqaayadaha maqaaxiyeyaasha ah ay had iyo jeer helaan warbixinno caafimaad oo ay tahay in ay maraan baaritaanno cilmi-nafsi, ayuu yiri Budak, ikçe Markii uu da'da sii weynaado, warbixinnadan ayaa qaata oo imtixaannada u qaata marar badan. Markaan fiirino warbixinnadaan, waxaan aragnaa indho-beel, lumitaanka dhegta iyo saameyn maskaxeed. ”
Budak wuxuu yidhi intii uu ka shaqeynayay khadka kacsanaanta sare ee wadooyinka tareenka, waxaa jiray kiisas wadne istaag ah .. Rağmen In kasta oo ay dhibaatadan jirto, waxaan haysannay saaxiibo indhaha ka dhacay dhegta darteed. Natiijadii dhicitaanka cinwaankan, saaxiibbadaani kama sii shaqeyn karaan sidii tababarayaal iyo farsamoyaqaanno. Ku orodka qayb kale. Tani waxay horseedaa khasaaro maadi iyo nafsi ah. ”
Budak wuxuu tilmaamay in tirada shaqaalaha firfircoon ee TCDD ay hoos u dhacday iyada oo ay ugu wacan tahay nafo luminta, go'itaanka lugaha oo ay ka dhacaan xirfaddan taasina waxay si xun u saameyn doontaa TCDD.
H. Erdinç Budak, Madaxweynaha United Railroads Association, wuxuu soo gabagabeeyey: “1949, magdhowga adeegga dhabta ah ayaa lasiiyay. 2008, wax-ka-beddel ayaa lagu sameeyay Sharciga 5510 isla markaana magdhowga adeeggayaga dhabta ah waa laga saaray. Sannadkii 2013, xubnaha saxaafadda, xildhibaano, TRT iyo shaqaalaha kaymaha ayaa mar labaad lagu soo daray sharciga, laakiin darawallada laguma darin. Ma aha isbarbar dhig, laakiin asxaabteena ayaa ku shaqeynaya xaalado aad u daran. Waxaan rajeyneynaa in gobolkayaga ay dib noogu soo celiyaan xuquuqdii ay ku xirnaayeen mar labaad ”.
Kayıp luminta maqalka ayaa la soo maray ”
Seyfullah Koç, oo muddo sanado ah ka shaqeynayay mashiin ahaan mashiinnada Tareenka Gobolka 26, wuxuu caddeeyey inay la kulmayaan xaaladaha cimilada adag iyo shilalka badan oo wuxuu yiri: için waxaa naga haray waxyaabo badan maxaa yeelay duruufaha shaqo ee jirkeena gudaha ayaa xun. Sanado badan oo shaqeynayay sanqadha ka dib, lumis maqal ayaa la kulmay Nasiib darrose, in kastoo aanan doonayn waddada waxaan la kulannaa shilal badan oo dilaa ah. Sababahaa dartood, waxaan la kulannaa dhibaatooyin nafsiyeed. Waxaan ka shaqeynaa khadadka korantada. Waxaan u nugulnaa kun volts magnitude magnitude 25. Inbadan oo kamid ah asxaabteena ayaa u dhintay wadna istaaga, caruurtooduna waa agoon. Sababahan dartood, waxaan codsaneynaa xaqa odayaashayadu inay gaboobaan ”.
Injineer kale Hakan Şen wuxuu cadeeyay inuu ku shaqeynayay tababar tabobar inta lagu gudajiray 26 sanadka iyo inuu kashaqeynayay shaqaale dowladeed tan iyo 1. Waxay na siisaa ruuxi ahaan. Ka dib markii aad si firfircoon uga shaqeyso sanadaha 26 waxaa lagu xiri lahaa qol, ayuu yidhi.
Şen wuxuu sheegay in kasta oo uu ku jiray xirfadda, inbadan oo kamid ah asxaabtiisa waxay lumiyeen lugahooda waxayna naftooda waayaan "Aan ku laabano nidaamkii hore oo aan siinno xuquuqdeena gaboobay ama aan siino xuquuqdeena shaqsiyeed".
Nidaamku wuxuu doonayaa magdhow magdhow
Mashiinka khamriga ee tareenka!
Qalabka tamarta iibsigu wuxuu iibiyaa hindisada qashinka loo yaqaan 'Hasanbey'
Kacbada xawaaraha sare ee xawaaraha sare ee Kocaeli
Qaadashada Mashiinka Dhismaha Rail Transts Production.
Saraakiisha Ururka Tababaridda